Rating: SKU: 180288-69-1. Category: ndị ọzọ na-
Ngwurugwu Monoclonal bụ ụdị ọhụụ ọhụrụ nke usoro ọgwụgwọ kansa "ezubere iche". Ihe na-alụso ọrịa ọgụ bụ akụkụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Dị ka ọ dị, ahụ na-emepụta ihe na-alụso ọrịa ọgụ na nzaghachi na antigen (dị ka protein dị na nje) na-abanye n'ahụ. Ihe ndị ahụ na-alụso nje ọgụ ọgụ na-akpata antigen iji gosi ya ka e bibie ya site n’usoro ahụ́ ji alụso ọrịa ọgụ. Na laabu, ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha antigens kpọmkwem na mkpụrụ ndụ cancer (ebumnuche) iji chọpụta protein iji kwekọọ na antigen. Mgbe ahụ, n'iji protein na anụmanụ na ụmụ mmadụ, ndị sayensị na-arụ ọrụ iji mepụta mgbochi pụrụ iche nke ga-etinye na antigen a chọrọ. Ihe mgbochi ga-etinye aka na antigens dabara dị ka isi dabara na mkpọchi. Nkà na ụzụ a na-enye ohere ọgwụgwọ ịchekwa mkpụrụ ndụ ụfọdụ, na-eme ka nsị dị mma na mkpụrụ ndụ dị mma. Enwere ike ịme ọgwụ mgbochi ọrịa monoclonal naanị maka ọrịa cancer nke ejiri antigens (yana usoro nje ahụ).
Pregabalin ntụ ntụ